12/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Mitaky “fitoniana” ny firenena… Milaza izany avokoa izay rehetra mandray fitenenana tato anatin’ny tapa-bolana mahery kely izao. Ny “fitoniana” ara-politika mazava ho azy no voaresaka amin’izany fa toa tsy misy miteny kosa ny fitoniana ara-toekarena sy fitoniana ara-tsosialy.
Milaza miara-mahita isika izao fa nidina tanteraka ny vidin’ny PPN, indrindra ny vary noho ny ezaky ny fitondram-panjakana sy ny minisiteran’ny Varotra manokana, ary mbola ny tahirim-bary navelan’ny ezaky ny governemanta Mahafaly Olivier no mameno ny tsena sy miantoka ny famatsiana vary hatramin’izao. Tokony ho laharam-pahamehana ho an’ny governemanta iaraha-mitantana ity araka izany ny mifehy ny vidin-javatra.
Mbola tafiditra ao anatin’izay “fitoniana” izay ihany koa anefa ny resaka fampianarana. Mitebiteby tokoa mantsy ireo ray aman-drenin’ny mpianatra vokatry ny grevin’ireo mpampianatra. Maika araka izany ny fametrahana “fitoniana” eo anivon’ny tontolon’ny fampianarana, ary andraikitry ny governemanta iaraha-mitantana ny mitady vahaolana amin’izany. Iaraha-mahalala tsara mantsy fa misy ambadika politika izao fitokonana ataon’ny mpampianatra izao, izany hoe, mpanao politika no mampirisika azy ireo.
Tsy tokony ho tahaka ny fandraisan’ny sasany ny antsoina hoe fahalalahana maneho hevitra sy demôkrasia araka izany ny fandikana ity hoe “fitoniana” ity. Noheverin’ny sasany fa ho azy irery tokoa mantsy izany fahalalahana maneho hevitra sy demôkrasia izany koa rehefa ny hafa no miteny na maneho hevitra dia nampangaina hatrany ho voavidim-bola. Inona no tiana ambara? Samy tompon’andraikitra amin’ny fametrahana ny “fitoniana” ny rehetra fa tsy mandeha lalan-tokana, tonga amin’ilay fomba fitenenana malagasy manao hoe: “Ny vy tsy mikitrana irery!”.
Ny hizoran’ny firenena any amin’ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken’ny rehetra no tanjona, izay rahateo koa no andraikitra voalohan’ity governemanta iaraha-mitantana ity, mifototra amin’ny fametrahana ny “fitoniana”.
Nivoaka tokoa ny nafenina ho an-dRavalomanana izao fa ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy no mikendry azy ho Filoham-pirenena, anton’ny fiarovana azy tsy voakasiky ny lalàna velona eto Madagasikara. Ny diany any ivelany, ny fitarainana isaka ny ...Tohiny